Sargaal katirsan ciidamada isku dhafka Gaalkacyo oo ku dhaawacmay qarax gaarigiisa loogu xiray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSargaal katirsan ciidamada isku dhafka Gaalkacyo oo ku dhaawacmay qarax gaarigiisa loogu xiray
January 6, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Gaalkacyo. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan ciidamada isku dhafka ah ee ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa si daran ugu dhaawacmay kadib markii walxo qarxa loogu xiray gaarigiisa fiidnimadii Axada, sida ay sheegeen haayadaha ammaanka.
Sargaalka oo magaciisa lagu sheegay Cabdicasiis Faarax Maxamed ayaa ahaa madaxa saadka ee ciidamada isku dhafka ah ee ammaanka magaalada Gaalkacyo.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo horer weeraro jaadkan oo kale ah uga geysatay magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay ku warameen warbaahintoodu.
Maxkamada sare ee ciidamada Puntland oo dil toogasho ah ku riday saddex askari oo dilay askar kale
Garoowe-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa wacad ku martay in ay dilli doonto xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhawaan la doortay, sida uu sheegay xildhibaan. Xildhibaan kasoo jeeda Puntland, oo codsaday in aan [...]
At least 7 dead in al-Shabab attack on Nasahablod hotel in Mogadishu
Somalia’s al Shabaab Islamist group launched a suicide bomb attack on a hotel in the center of Mogadishu on Saturday before fighters stormed inside, police and the militant group said. Police said at least [...]